बडादसैँका साइतः विजयादशमी असोज २९ गते १०ः०२ बजे शुभ – Tandav News
बडादसैँका साइतः विजयादशमी असोज २९ गते १०ः०२ बजे शुभ
ताण्डव न्यूज द्वारा २०७८ आश्विन ८ गते शुक्रबार १५:२८ मा प्रकाशित
नेपाल पञ्चांग निर्णायक समितिले यस वर्षको बडादसैँका विभिन्न साइत सार्वजनिक गरेको छ । असोज २१ गते बिहीबार बिहान ११ः४६ बजे घटस्थापनाको साइत रहेको समितिका अध्यक्ष प्रा. श्रीकृष्ण अधिकारीले जानकारी दिए । घटस्थापनाका दिन चित्रा नक्षत्र र वैधृति योग परेकाले ११ः४६ बजेअघि चित्रा नक्षत्र र वैधृति योगको शान्ति गरेर घटस्थापना गर्नुपर्छ ।
असोज २२ गते शुक्रबार झण्डा फेर्ने साइत ११ः५६ बजे रहेको छ । पश्चिम फर्केर झण्डा फेर्नुपर्ने उनले जानकारी दिए । असोज २५ गते सोमबार पचली भैरव यात्रा गरिन्छ । असोज २६ गते मंगलबार फूलपाती परेको छ । फूलपाती बेलुकीको समयमा गरिने र यसको साइत आवश्यक नपर्ने अध्यक्ष प्रा. अधिकारीले बताए ।
मध्यपहाडी लोकमार्गको पर्वत खण्डको काम शुरु, कुस्माको सडक चार लेन
गण्डकी सरकार : काँग्रेसबाट मणिभद्र शर्मा, मेखलाल श्रेष्ठ र विन्दुकुमार थापा मन्त्री…